चीनले आउँदाे ५ दिनमा चिङ्दाओ सहरका सबैकाे काेराेना परीक्षण गर्ने:: Naya Nepal
चीनले आउँदाे ५ दिनमा चिङ्दाओ सहरका सबैकाे काेराेना परीक्षण गर्ने
चीनको चिङ्दाओ सहरले सबै नागरिकको कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भएको छ । झण्डै ९० लाख जनसङ्ख्या रहेको चिङ्दाओ सहरले आउँदो पाँच दिनमा सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको हो ।
विदेशबाट आएर अस्पताल उपचार गराइरहेका १२ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि चिङ्दाओ सहरले सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको हो ।
गएको मे महिनामा पनि चीनले कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरका एक करोड १० लाख नागरिकको कोरोना परीक्षण गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चीनबाट फैलिन सुरु भए पनि अहिले त्यहाँ सङ्क्रमण नियन्त्रणतर्फ गइसकेको छ ।
तर विश्वका धेरै जसो देशमा कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको छ र अझै पनि लकडाउन लगाइएको छ ।
चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल साइट उइवोमा पोस्ट गरिएको एक विज्ञप्तिमा चिङ्दाओको नगरपालिका स्वास्थ्य आयोगले सङ्क्रमण देखिएकोमध्ये ६ नयाँ मामिला र ६ स्पर्शाेन्मुख (उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरु) मामिला रहेको जनाएको छ ।
ती सबै मामिला एउटै अस्पतालसँग जोडिएको ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ ।
चीनमा अहिलेसम्म ८५ हजार पाँच सय ७८ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा चार हजार ६ सय ३४ जनाको ज्यान गएको छ ।
एजेन्सी, २६ असोज । कोरोना भाइरस नोट, सिसा र स्टिलमा २८ दिनसम्म बाँच्ने तथ्य पत्ता लगाएको अस्ट्रेलियाका अनुसन्धादाताले दाबी गरेका छन् । अस्ट्रेलियाका अनुसन्धादाताले सोमबार कोरोना भाइरस बैंक नोट, स्टिल र सिसामा २८ दिनसम्म बाँच्न सक्ने दावी गर्दै सरसफाइ र हात धुने कुरामा विशेष ध्यान सुझाव समेत दिएको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : भोलि संसदीय दल बैठक, त्यसअघि के के हुँदैछ?
सत्तारुढ दल नेकपाका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि परेको अविश्वास प्रस्तावको विषयमा मंगलबार १ बजे प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा छलफल हुने भएको छ।
एक सांसदका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुने संभावना निकै नै कम छ।
‘अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने संभावना छैन, दलको बैठकमै मुख्यमन्त्रीले यसको सामना गर्नुहुनेछ,’ प्रदेश सभाका ती सांसदले नेपालखबरसँग भने।
आइतबार नेकपा सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले नेकपा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उनीहरुले नेकपा संददीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको भन्दै सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
शाहीमाथि परेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन अहिले सो प्रदेशका नेताहरुबीच सुर्खेतमा छलफल भइरहेको छ।
माधवकुमार नेपाल र पुर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच पहिलो चरणमा छलफल गरेपछि यामलाल कँडेल लगायतका संसदहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बैठकस्थलमा रहेका एक नेताले बताए।
‘सकभर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको छ, यदि भएन भने संसदीय दलमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँछौं,’ बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
ती नेताको भने भोलिसम्ममा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनसक्ने अपेक्षा छ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजै कर्णालीका नेताहरुसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए।
सोमबार विहान सो प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन लगायतका नेतासँग प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटारमा फेरि छलफल गरेका थिए।
त्यसलगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि प्रचण्डले छलफल गरे।
त्यसपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटी मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए।
पूर्वएमाले एकढिक्का भएपछि तेस्रो प्रयासमा शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका कूल ३३ मध्ये १८ सदस्यले आइतबार महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रदेशका एक सांसदका अनुसार सबैभन्दा पहिले सो प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दलकै संसदीय दलमा छलफल हुनेछ र त्यसका लागि संसदीय दलका नेताले बैठक बोलाउनुपर्छ। अनिमात्र बैठकमा त्यसबारे छलफल हुनेछ।
आइतबार दिउँसो प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहसमक्ष १८ जना सांसदले दलका नेता शाहीप्रति विश्वास गुमेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पुर्व एमालेका १५ र पुर्व माओवादी केन्द्रका ३ जना सांसद छन्।
प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका सुर्खेत २ (ख) का सांसद यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको अगुवाई गरेका हुन्। उनले सो सूचिमा पनि पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभा र संविधान सभामा सांसद रहिसकेका पूर्वएमाले नेता कँडेल गणतन्त्र आउनुअघि नै पर्यटनमन्त्री भइसकेका नेता हुन्।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा सुरुमा कँडेलको चर्चा थियो। पहिलेदेखि नै वामदेव गौतमनिकट रहेका उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि नजिक छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा सो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। तर दुईपार्टी एक हुँदा त्यसको असर भने कँडेलमा पर्‍यो। उनले कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर गुमाए।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि दुई पक्षले मुख्यमन्त्रीमा भागवण्डा गरे।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री बने।
प्रदेश सभाका ४० मध्ये नेकपाका ३३ सीट छन्। जसमा तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्।
धेरै सांसद आफ्नो पक्षका भएकाे हुँदा संसदीय दलको नेतामा कँडेलले दाबी जारी राखे।
२०७५ पुष २ गते पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै हस्तक्षेप गरी शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो। त्यतिबेलैदेखि नै कँडेल मुख्यमन्त्री शाहीप्रति सकारात्मक रहेनन्।
तेस्रो पटकको प्रयासमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
कँडेल नेतृत्वमा प्रदेशका असन्तुष्ट सांसदहरुले शाहीले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे। तर दुई पटकका प्रयास सफल हुन सकेनन्।
आइतबार तेस्रो पटकमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सफल भएको एक सांसदले बताए।
‘यसअघि दुई पटक प्रयास गरेका थियौं सफल भएन, यो तेस्रो पटकमा दर्ता भएको हो,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने।
उनले याे प्रस्तावले देशव्यापी तरंग ल्याइसकेकाे र यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि देखिने बताए।
तर यसको जिम्मा भने कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वले लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
कर्णालीबाट यो अभ्यास सुरु भएपछि पार्टी एकतालाई असर गर्छ भनी अहिलेसम्म सहमति गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्ना कुराहरु सुनुवाइ नगरेपछि कर्णालीबाटै यो जोखिम उठाउनु परेको उनको दाबी थियो।
यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले पार्टीभित्रको लडाँई छरपष्ट हुँदा समस्या झन् बल्झिने भन्दै सो अविश्वासको प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि साे कदम अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर, तेस्रो पटकमा भने पूर्वएमाले एकठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको अर्का एक सांसदले बताए।
यसपटक उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टसहित पुर्वमाओवादीकै ३ जना सांसद समेत शाहीविरुद्ध देखिएका छन्।
अब शाहीले संसदीय दलमै त्यसको सामना गर्नुपर्नेछ। कर्णाली प्रदेशका सांसद गाेपालप्रसाद शर्माले अविश्वासको प्रस्ताव पार्टी एकताको स्प्रिटविरुद्ध आएको र यसले अराजकताको विजारोपण गरेको प्रतिक्रिया दिए।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै रुकुम पश्चिम २ का सांसद शर्माले पार्टी अनुशासन, निर्देशन र एकता भाड्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए।
‘यो प्रस्ताव एकताको स्प्रिट र मर्मविरुद्ध छ किनभने अल्पमत र बहुमततिर जाने हो भने त्यसले एकतालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन र यसको परिणाम के हुन्छ भनेर सोँचेको देखिएन,’ शर्माले भने, ‘अहिले साथीहरुले जे गरिरहेका छन् त्यो उपयुक्त छैन किनभने यसले अराजकताको विजारोपण मात्रै गर्छ र पार्टीले नै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अराजकता बढ्छ र फेरि ६ महिनापछि नै त्यही खेल सुरु हुन्छ।’
उनले नेकपाभित्रै अल्पमत र बहुमतको अभ्यास गर्दा सबै सांसद एकै ठाउँमा रहने अवस्था नहुने समेत बताए।
‘अल्पमत र बहुमत भनेर जाँदा हामी एकठाउँमा कसरी रहन्छौं र? पुर्वएमाले एमालेतिरै फर्किन्छ, माओवादी माओवादीतिरै फर्किनुपर्छ,’ शर्माले थपे, ‘दुई, तीनवटा गुट छन् ती आआफ्ना गुटतिर फर्किनुपर्छ जसले पार्टीलाई हित गर्दैन।’
उनले यसबारेमा अब घनिभूत छलफल हुने बताए।
‘बैठकबाट सहमति गरेर एकताको भावनाअनुसार जाने हो भने एउटा समझदारी बन्छ होला, अराजक ढंगले अघि बढ्दा अरु पनि अराजकताका श्रृंखलाहरु थपिन्छन्,’ उनले थपे।
मुख्यमन्त्री शाहीले दलको बैठकमै विश्वासको मत लिने प्रयत्न गर्ने र त्यसो हुन नसके सो प्रस्तावलाई बाहिरी रुपले सामना गर्ने रणनीति बनाउने नेताहरुको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालय नेपाल पक्षलाई नदिँदा एकजुट भए पुर्वएमाले
माधव नेपालपक्षीय एक सांसदका अनुसार कर्णाली सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल पक्षले धानिदिएको थियो।
गएको वर्षको दशैँताका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका खड्क खत्रीले भ्रष्टाचार आरोपमा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन पटक पटक भएको प्रयासलाई मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरे।
त्यसपछि पुर्वएमाले एक ढिक्का भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक सांसदले बताए।
‘रिक्त रहेको मन्त्रालयमा हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीलाई लैजान कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतसँग कुरा गर्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मान्नुभएन र एकवर्षदेखि आँफैसँग राखिराख्नुभएको छ,’ नेपालपक्षीय ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘दुई पटक सरकार ढाल्ने प्रयासलाई असफल पारेको टीमकै नेतालाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीले रोकेपछि अहिले बाध्य भएर केपी ओली टीमसँग मिलेको हो।’
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका पार्टी इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माको हैकमका कारण पनि पूर्वएमालेहरु एक ठाउँमा आएको ती सांसदको भनाइ छ।
‘नेपाल पक्षले सरकार बचायो तर एउटा रिक्त मन्त्री पनि बनाउन नसक्ने भएपछि साथीहरुमा आक्रोश थपियो। खासमा मुख्यमन्त्रीले जनार्दनबाहेक अरुको कुरै सुन्नुभएन,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारका हरेक निर्णयमा शर्माको हस्तक्षेप हुने गरेको थियो। ‘यसले दुरी बढायो अनि ल जनार्दनलाई पनि देखाउनुपर्छ भनेर यो पटक साविक एमाले एक ढिक्का भएर थालिएको अभियान हो अविश्वासको प्रस्ताव,’ ती सांसदले भने।